PowerChord: Njikwa ndu ndu mpaghara etiti etiti na nkesa maka ụdị ekesara ndị na-ere ahịa | Martech Zone
PowerChord: Njikwa ndu ndu mpaghara etiti etinyere na nkesa maka ụdị ekesara ndị na-ere ahịa
Ụdị buru ibu na-enweta, ka akụkụ ndị na-emegharị emegharị na-apụta. Ụdị ndị a na-ere site na netwọk nke ndị na-ere ahịa mpaghara nwere ọbụna mgbagwoju anya nke ebumnuche azụmahịa, ihe ndị ka mkpa, na ahụmihe dị n'ịntanetị ị ga-atụle - site n'ụdị ika ruo n'ọkwa mpaghara.
Ụdị chọrọ ka achọta ya ngwa ngwa ma zụta ya. Ndị na-ere ahịa na-achọ ụzọ ọhụrụ, ọtụtụ okporo ụzọ ụkwụ, na ahịa na-abawanye. Ndị ahịa chọrọ nchịkọta ozi na-enweghị esemokwu na ịzụ ahịa - na ha chọrọ ya ngwa ngwa.
Ndị ahịa nwere ike ịre ahịa nwere ike ịpụ na nkuku anya.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ruru n'ime nkeji ise karịa nkeji iri atọ, ohere nke ijikọ ndụ na-eme ka okpukpu 30 dịkwuo mma. Na ohere nke ndu ịkpọtụrụ n'ime nkeji ise na-awụlikwa elu ugboro 100.
Ọrịre bara uru
Nsogbu bụ na ụzọ ịzụrụ anaghị adịkarị ngwa ngwa ma ọ bụ enweghị esemokwu maka ngwaahịa ndị ere ere. Kedu ihe na-eme mgbe onye ahịa hapụrụ webụsaịtị ejiri nlezianya chepụta nke ika iji nyochaa ebe ọ ga-azụta na mpaghara? Ndị na-ere ahịa ebe ahụ ọ tụgharịrị n'ime igbe mbata? Kedu ngwa ngwa nlebanya mere - ọ bụrụ na ọ dị?
Ọ bụ ụzọ na-adaberekarị na akwụkwọ rụrụ arụ na usoro na-ekwekọghị ekwekọ. Ọ bụ ụzọ jupụtara na ohere efu maka ndị niile metụtara ya.
Na a na-agbanwe ya site na akpaaka ngwanrọ.
Nlebanya Platform PowerChord
PowerChord bụ ngwọta SaaS maka ụdị ndị na-ere ahịa na-ahụ maka njikwa na nkesa ụzọ mpaghara. Igwe ikpo okwu etiti etiti na-achịkọta ngwa ọrụ CRM kachasị ike yana ọrụ mkpesa iji bulie ụzọ na ọkwa mpaghara site na akpaaka, ọsọ na nyocha. N'ikpeazụ, PowerChord na-enyere ndị ahịa aka iwulite mmekọrịta ha na ndị ahịa ha na-amalite site na netwọk ndị na-ere ahịa ha, yabụ na ọ nweghị ụzọ na-agaghị agbanwe.
Njikwa ndu na nkesa Powerchord
Ụdị na ndị na-ere ahịa nwere ike iji PowerChord's Ebe Iwu. Site na Command Center, ụdị nwere ike kesaa ụzọ na-akpaghị aka - n'agbanyeghị ebe ha si - nye ndị na-ere ahịa mpaghara.
A na-enye ndị na-ere ahịa ikike ịtụgharị ụzọ ndị ahụ ka ọ bụrụ ahịa. Onye na-ere ahịa ọ bụla nwere ohere ịnweta ngwa njikwa ụzọ iji jikwaa ọwara ire ahịa mpaghara ha. Ndị ọrụ niile nọ n'ụlọ ahịa nwere ike ịnweta ozi ndu iji mee ka kọntaktị mbụ dị ngwa ma welie ohere nke ire ere. Ka ọ na-eduga n'ọganihu site na oghere ahịa, ndị na-ere ahịa nwere ike ịgbakwunye ndetu ka onye ọ bụla nọrọ n'otu ibe ahụ.
Akuko ndu mpaghara na-erute akara ka ndị isi ahịa wee nwee ike nyochaa ọganihu n'ofe ebe niile.
Ebe ọ bụ na kọntaktị ngwa ngwa bụ isi ihe iji mechie ire ere, ikpo okwu PowerChord na-ebute ụzọ ọsọ ọsọ. A na-eme ka ndị na-ere ahịa mara ọkwa ọhụrụ ozugbo - gụnyere site na SMS. Nke a nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka maka ndị ọrụ na-ere ahịa mpaghara anaghị ejikọta ya na tebụl na kọmputa ụbọchị niile. PowerChord ewepụtala One Click Actions n'oge na-adịbeghị anya, njirimara na-enye ndị ọrụ ohere imelite ọkwa nke ndu n'ime ozi ngosi na-enweghị mkpa ịbanye na Center Command.
Nchịkọta Powerchord na mkpesa
PowerChord na-ahazi mkpesa iji kwalite mbọ ahịa mpaghara nke ụdị. Ha nwere ike ilele mmekọrịta ndị na-ere ahịa mpaghara - gụnyere ịpị-ịkpọ oku, pịa maka ntụzịaka, na ntinye akwụkwọ ụzọ - n'otu ebe wee hụ ka ha na-eme ka oge na-aga. Dashboard ahụ na-enyekwara ndị na-ere ahịa ohere ịlele usoro ụlọ ahịa mpaghara, dị ka ngwaahịa, ibe na CTA na-arụ ọrụ nke ọma, ma chọpụta ohere ọhụrụ maka ntụgharị.
Site na ndabara, ịkọ akụkọ na-apụta - nke pụtara na onye ọ bụla na-ere ahịa nwere ike ịhụ naanị data ha, ndị njikwa nwere ike ịhụ data nke ebe ọ bụla ha na-ahụ maka ya, ruo n'ụzọ zuru ụwa ọnụ nke ika ahụ dị. Enwere ike ịhazi ikike iji gbochie ịnweta data a ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Ndị na-ere ahịa ika nwekwara ike nweta nghọta ka mgbasa ozi ahịa mpaghara ha si arụ ọrụ, gụnyere ọnụ ahịa kwa mkparịta ụka, ọpịpị, ntụgharị na ebumnuche ndị ọzọ. Nchịkọta na njirimara mkpesa PowerChord na-ejikọta ntụpọ n'etiti ụzọ na ego ha nwetara, na-ekwe ka ụdịdị kwuo:
Mgbalị ahịa ahịa dijitalụ anyị jikọtara ya na njikwa ndu na mbọ nkesa anyị nyere $50,000 na ego ha nwetara; 30% nke ahụ ghọrọ ire ere, na-ebute ụzọ 1,000 n'ọnwa gara aga.
Na-ewekọta ihe a niile: Grasshopper Mowers na-eji PowerChord kwalite webụsaịtị ndị na-ere ahịa na-abawanye na-eduga 500%
Ndị na-akpa ahịhịa ahịhịa bụ onye na-emepụta mowers-ọkwa azụmahịa rere naanị site na netwọk nke ihe dịka 1000 ndị na-ere ahịa nọọrọ onwe ha na mba niile. Ụlọ ọrụ ahụ maara na enwere ohere iji dọta ndị ahịa ọhụrụ ma tolite òkè ahịa ya. Ohere ahụ dị n'aka ndị na-ere ahịa obodo.
Na mbụ, mgbe ndị ahịa nwere ike nyochaa ahịrị ngwaahịa na webụsaịtị Grasshopper, ohere ịre ahịa na-agbaze ka ha na-abanye na saịtị ndị na-ere ahịa mpaghara. Akara grasshopper kwụsịrị, saịtị ndị na-ere ahịa gosipụtara ahịrị akụrụngwa asọmpi na-enweghị ozi ụlọ ahịa mpaghara, na-akpata ọgba aghara ndị ahịa. N'ihi ya, ndị na-ere ahịa na-efunahụ ụzọ ha na-akwụ ụgwọ ma na-agbasi mbọ ike imechi ahịa.
N'ime ọnwa isii, Grasshopper na PowerChord rụkọrọ ọrụ iji kwalite njem ika ya na mpaghara site n'ilekwasị anya na ụzọ, ịmepụta akara ngosi dijitalụ, itinye akpaaka, na ịkwado mbọ ndị na-ere ahịa n'ahịa. Grasshopper mụbara ụzọ site na 500% yana ire ndị na-ebute ụzọ n'ịntanetị site na 80% n'afọ mbụ.
Budata ọmụmụ ihe n'uju ebe a
Ị nwetara ndu. Ugbu a gịnị?
Otu n'ime nsogbu ndị ụlọ ọrụ na-eche ihu bụ ịtụgharị ụzọ n'ime ahịa. A na-eji dollar azụmaahịa dị mkpa na-adọta ndị na-azụ ahịa. Mana ọ bụrụ na ịnweghị usoro iji meghachi omume na ụzọ ndị ị mepụtara, mgbe ahụ, dollar na-efunahụ ya. Nnyocha na-egosi na ọ bụ naanị ọkara nke ndị ndu niile ka a na-akpọtụrụ. Mee ka usoro ịre ahịa gị gbasie ike site n'itinye usoro nchịkwa kacha mma iji metụta ahịa gị nke ukwuu.
Zaghachi onye ndu ọ bụla - Nke a bụ oge ịkekọrịta ozi bara uru gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị wee nyere onye ahịa aka ịme mkpebi ịzụrụ. Ọ bụkwa oge iji tozuo ụzọ wee chọpụta ọkwa ọmụrụ nwa nke onye ọ bụla nwere ike ịzụ ahịa. Iji nzikọrịta ozi dị mkpa na ahaziri ahazi ga-ebuli ntughari.
Nzaghachi ngwa ngwa dị mkpa - Mgbe onye ahịa dejupụtara akwụkwọ ndu gị, ha dị njikere ịme nzọụkwụ ọzọ na njem ịzụ ahịa ha. Ha emela nyocha zuru oke iji nwee mmasị na ngwaahịa gị ma dị njikere ịnụ n'ọnụ gị. Dị ka InsideSales.com si kwuo, ndị na-ere ahịa na-agbaso ihe ntanetị weebụ n'ime nkeji 5 bụ ugboro 9 nwere ike ịtụgharị ha.
Tinye usoro nsochi - Ọ dị mkpa ịnwe usoro akọwapụtara maka ịgbaso ntuziaka. Ịchọghị ịhapụ ohere site n'ịghara ịgbaso ngwa ngwa ma ọ bụ chefuo kpamkpam. Ị nwere ike ịtụle itinye ego na CRM ma ọ bụrụ na i nwebeghịrị - otú a ị nwere ike idobe ụbọchị nleba anya, nkọwa zuru ezu banyere onye ahịa, na ọbụna tinyeghachi ha n'ụbọchị ọzọ.
Tinye ndị mmekọ isi na atụmatụ gị - Maka ụdị ndị na-ere ere, ire ere na-eme n'onwe ya na ọkwa mpaghara. Nke ahụ pụtara na onye na-ere ahịa mpaghara bụ ebe mmetụ ikpeazụ tupu emechi. Kwanye netwọk ndị na-ere ahịa gị na ngwaọrụ iji nyere ha aka imechi - ma nke ahụ ọ bụ ọdịnaya ga-eme ka ha mara ihe na ngwaahịa gị ma ọ bụ ngwọta akpaaka iji nyere aka na njikwa ndu na oge nzaghachi.
‍Nweta akụrụngwa ndị ọzọ na blọọgụ PowerChord
Tags: dealernchịkọta ndu ndị na-ere ahịadealership nchịkọtanchịkọta ụzọ ndị na-ere ahịamkpesa ndị na-ere ahịaire ereahihiaahihia mowersndu nchịkọtankesa ndundu nduike ụda
Stephanie Shreve bụ osote onye isi oche nke mmekọ mmekọ na PowerChord. Ọ bụ sọftụwia na onye isi azụmaahịa dijitalụ nwere ahụmịhe afọ 20+ na-eduga otu egwuregwu dị elu iji kwado ụdị ụwa na ndị mmekọ atụmatụ. Site na ndekọ ndekọ nke arụmọrụ, Stephanie na-agbalịsi ike iwulite mmekọrịta siri ike na ndị ahịa iji mepụta ngwọta na-ebute nsonaazụ azụmahịa. Ọ na-anabata ohere ndị teknụzụ na-apụta na-enye iji rute ahịa ọhụrụ na ịzụlite azụmahịa.
Nleta ndị na-ege ntị: Nkebi nke ndị na-ege ntị ọgụgụ isi na ngwa nyocha
tọghatara: Jiri wijetị ịkpọghachi ekwentị a tụgharịa nleta webụsaịtị ọzọ